Maxamed Cabdulahi Booy | Bakool.net
Home / Author Archives: Maxamed Cabdulahi Booy
Author Archives: Maxamed Cabdulahi Booy
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee JFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu horeyn kulanka furay ayaa sheegay in Golaha kalfadhigan shanaad ay horyaalaan howlo fara Badan oo ay mid yihiin sidii dalka loogu diyaarin lahaa hanaan doorasho qof iyo cod ah sidaas daraadeedna xildhibaanada golaha looga baahanyahay in ay ilaaliyaan waqtiga kulamada golaha si loogu guuleysto howlaha golaha horyaala. Intaasi ...
Wafdi heer sare ah oo ka kooban labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo Guddoomiyaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa ay ka qayb galayaan shirka 140-aad ee midowga Baarlamaannada Adduunka, kaas oo haatan si habsami leh uga socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Shirkan 140-aad ee Midowga Baarlamaannada Adduunka waxaa guddoominaya Guddoomiyha Golaha Shuurada ee ...
Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa lagu magacaabay taliyaal ciidan uu yeelanayo maamulkaasi. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Wareegtada kasoo baxday ayaa lagu magacabaay Taliyaha ciidanka Daraawiishta Koonfur Galbeed oo loo magacaabay Yoosin Aadan Xasan halka taliye kuxigeena loo magacaabay Cabdulle Isaaq Ibraahim. Wareegtada ayaa sidoo kale lagu magacaabay Taliyaha howlgelinta Ciidanka Koonfur Galbeed oo loo magacaabay Aadan ...
Madaxweynaha dawlad gobaleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xassan Maxamed (Laftagareen) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada KGS oo ay ka qayb galeen khuburo iyo howl-wadeenno ka socda xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya. Shirka ayaa looga hadlay qorsha daadejinta tubaha qaranka, waxa uuna madaxwaynaha Koonfur galbeed uga mahad-celiyay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre sida uu uga aqbalay codsigiisii ahaa in koonfur galbeed ...
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax gaari oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Isgoyska Taleex ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo ah meel mashquul badan oo gaadiidka ay isaga kala gudbaan. Qaraxan ayaa ka dhashay gaari SURF ah oo la soo hoosgeliyay qaraxa nuuca dhejiska, sida ay Shabakadda Dhacdo.com u sheegeen saraakiil ammaanka qaabilsan. Gaariga qarxay ayaa waxaa ...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in Dowlada Federaalka ay diyaar u tahay sidii ay Ciidamada Qalabka sida u heli lahaayeen Xaquuqdooda iyo niyad dhiskooda isla markaana laga doonayo inay dhaqaaqaan oo Cadowga ay ugu tagaan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan. “Dowlada waxay diyaar u tahay inay Xuquuqdiina idin siiso, Raashinkiina waad heleysaan, Mushaarkiina waad heleysaan, Niyad ...
Al Shabaab ayaa manta qaraxyo ismiidaamin iyo mid toos ah waxa ay ku weerareen xarunta Wasaarada Shaqada iyo Shalaalaha Xukuumada Soomaaliya oo kutaala agagaarka Isgooska Jubba gaar ahaan dhinaca Degmada Shangaani. Warar aan helnay ayaa sheegaya in weerarka lagu qaaday xarunta Wasaarada Shaqada iyo Shaqaalaha dadka ku dhintay uu ku jiro Wasiir kuxigeenkii Wasaaradaasi Saqar Ibraahim Cabdalla oo sidoo kale ...
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa magaalada Brussels ee dalka Belgium uga qayb galay shir looga hadlayo ka hor-tagga iyo la dagaallanka rabshadaha salka ku haya Xag-jirnimada. Shirka oo maanta furmay qorshuhuna yahay in uu soo xirmo berri oo Jimce ah ayaa si gaar ah looga hadlayaa sidii casharo looga baran lahaa hababka guulaystay ee ...